Sidee Ugu Haboon ee ay Somalilandta Dimuqraaddiga ahi Isku Xukumi Kartaa? | Somaliland Post
Home Maqaallo Sidee Ugu Haboon ee ay Somalilandta Dimuqraaddiga ahi Isku Xukumi Kartaa?
Sidee Ugu Haboon ee ay Somalilandta Dimuqraaddiga ahi Isku Xukumi Kartaa?
Waxa ay ahayd taariikh aan aad u sii fogayn markii Axsaabta siyaasadda ee adduunku ka bilaabmeen qaaradda Yurub qarnigii 17aad. Nidaamkan Axsaabta badan (mult-party political system) waxa aad ula dawakhsan dalalka adduunyada intooda aan dhaqanka-siyaasaddeedkan asal ahaan u lahayn. Gaar ahaan waddamada la soo degay nidaamka dimuqraaddiyadda dawladnimadda casriga ah ku saleysan. Kuwaas oo u badan dalalka Afrika, Eeshiya iyo Koonfurta Maraykanka.
Waxa ay Axsaabtu siyaasaddu ka bilaabmeen waddamada Galbeedka Yurub, gaar ahaan waddanka Giriiga. Nidaamka dimuqraadiga ah ujeedada ugu weyni waa in dadku doortaan cidda xukunka u hayneysa muddo xilleed cayiman, waxa ay isku xukumayaan ee afkaar ah iyo sharciyadda loo raacayo habkaa is-xukunka ee dadku ay doorteen. Nasiib daro se taasi ma aysan dhicin wakhtigaa ee awooddu kaliya waxa ay gacanta u gashey laba dhinac oo ahaa kuwii ugu xooga roonnaa bulshada.
Waxa bilaabmay nidaam aas aas kooda ay lahaayeen dadyowgii maal-qabeenka ahaa wakhtiyadaa oo dhinac ah (the Plebeians). Kuwaas oo rabey in ay awoodda is-maamul ku ilaashadaan danahooda ganacsi oo ay markaa lagama maarmaan u arkayeen. Dhinaca kale qolooyinkii awoodda boqortooyada haystey (the patricians). Kooxdani ujeedada ugu weyn ee ay u sameeyeen dhismaha xisbiyada waxa ay ahayd si ay ugu ilaashadaan awoodda xukunka ee gacantooda muddada dheer ku soo jirtay iyo waliba maalkooda oo ay u arkayeen in kaliya lagu ilaalin karo nidaam siyaasi ah oo qori isku dhiib ah. Waynu ognahay oo ma kala maarmaan tijaaradda iyo awooddu (power and wealth).
Waxa xusid mudan in nidaamkan axsaabta ay xilligaa kaliya u coddeyn jireen dadka intiisa wax haysata sida ‘’Upper Class and Middle Class Communities’’. Laakiin kacdoono shacab ‘’Revolutions’’ oo ka hor yimi awgeed ayey xaqoodii ku heleen dhamaan intii lab ahayd ee ku jirtay dabaqaadka hoose ee shaqaalaha ‘’proletariat’’. Markii dambe na dumarku ay xaqoodii soo dhacsadeen sida taariikhda ‘’Suffragettes’’ ay xusayso. Axsaabta dunidu muddo markii ay sidaa ahayd ayaa waxa dadkii danyarta ahaa iyaguna dhinacooda sameysteen Axsaab dantooda ka turjunta oo u adeegta. Badi Axsaabtaa waxa loogu magac daray axsaabta shaqaalaha (labour Parties) waxa ilaa iyo hadda ay ka jiraan dalalka Europe intooda badan.
Waa sidaa sida ay arragtiyaha ‘’Ideologies’’ ama afkaarta kala duwan ee Midig iyo Bidix ku abuurmeen. Dunida Saddexaad se sidaa waa ay ka duwan tahay oo waxa ay axsaabtu ku sameysmeen nidaam habkii ay dadku u yaaleen ama u dhaqnaayeen ah, taas oo aan dabbaqaad dhaqaale marnaba shaqo ku lahayn ee dhaqan iyo caadooyin bulsho inta badan ka duulaya ‘’social structure’’ sida qabaa’il, qoomam kala duwan amaba se diimo. Sababtuna waxa weeyi Afrika kama aysan jirin boqortooyooyin sida kuwa Yurub u xoog weyn. Halkaa boqortooyada waxa ugu jiray nidaamkii gumeysiga ee Afrika yimi badi horaantii iyo kala badhkii qarnigii 19 aad. Halka aaney jirin dabaqaad dhinaca bulshada oo ku saleysan tijaarad.
Dimuqraaddiyadda iyo Dhaqan – Siyaasaddeedka Somaliland
Haddaba bal aan wax yar is-dul taago nidaamka aan u socdo ee dimuqraaddiga ah ee ka jira Somaliland oo aynu ognahay in ay habkan dawladnimadda ee casriga ah ay soo amaaneysatey sannadkii 2001. Markii haftida dadweyne lagu ansixiyey dastuurka oo ahaa mid ku suntan nidaamka axsaabta badan. Waxa cad in Somaliland ay ku hafatey habkii dimuqraaddiyadda iyo nidaamka axsaabta badan oo ku saleysan dawladnimo casri ah. Waxa na is dhex-galey saddex arrimood oo hab-dhaqanka bulshada ka mid noqdey, kuwaas oo laba ka mid ahi yihiin dhaqamo rasmi ah oo bulshada u ah xudun dhaqan nololeed.
Bulsho waliba waxa ay leedahay dhaqan-siyaasaddeed u gaar ah oo ka turjumaya habka ay bulshadaasi u dhaqantahay, sida caadooyinkeeda guud, kala duwanaanshiyaha ummadda, sida midabka, afka, qoomiyadaha, qabaa’ilka ama diinta hadba ummaddaasi aaminsan tahay. Bal haddaba aan dhaqan-siyaasaddeedka Somaliland cabbirno ama xusno ka uu yahay. Dhaqan-siyaasaddeedka Somaliland waxa uu iskugu jiraa saddex nooc oo laba ka mid ahi asal u yihiin ummadda. Halka midka kale na laga soo ammaaneystey waddamada Reer Yurub iyo dunida horumartey.
Dhaqan-siyaasaddeedka koowaad ee Somaliland waa dad u kala yaala qabaa’il iyo reero kala abtirsiin ah. Laakiin waxa xusid mudan in ay isaga mid yihiin dhinaca hab-fikirka, dhaqanka, midabka, afka iyo diintaba. Waxa kale oo xusid mudan in aaney dabaqaadka nolosha ee dhinaca hayntu ama tijaaraddu aaney ahayn mid aad u kala fog. Tani waxa ay ka dhigtey ummadda mid is ah oo leh wax wada-cun iyo qaybsiga hadba wixii la hayo oo aan la kala lahayn. Inkasta oo dhibka arrintani ay leedahay tahay in la waayo haykalkii kala sareynta ee isku noqoshada madax iyo mijo oo dawladnimo iyo qaran ahaanshiyaha laga ma maarmaan u ah, si loo helo loo shaqeeye iyo shaqeeye. Halka ay ummaddu u qaabeysan tahay maanta nin wax haya iyo nin kale ba mid abtirsiinyo wadaag ah oo ka qatani ka dhergay reernimo ku difaaco isaga oo aan wax ba ku qabin. Ama in reerku helo saami qaybsi Wasiirku ugu mudan yahay, isla markaana yahay wax lagu xisaabtamo oo la iskugu hiiliyo wada-jirna loo doonto iyada oo abtirsiinyo laga duulayo.
Dhaqanka Ruuxiga ah
Dhaqan-siyaasaddeedka labaad ee Somaliland waa in ay tahay dad isku diin ah oo aaminsan dhamaantood diinta Islaam oo Sunni ah, wallow faracyo kala duwani jiraan. Haddana Kala duwanaanshiyo la’aantan mad-habta Sunnigu ahi waxa ay faa’iido u tahay midawga iyo is-ahaanshiyaha ummadda. Waxa kale oo ay taageero u tahay nabad-gelyada iyo wadajirka bulshada oo aan looga baqeyn in ay tafaraaruq ku keento wax wada lahaanshiyaha sida ka dhacda waddamo badan oo adduunka ka mid ah una badan Afrika iyo Eeshiya. Inkasta oo marka ay diinta iyo qabiilka noqoto aad moodo in dadku si fiican ugu dhaqmaan habka qabiilka. Waxa se dhacda in afka si xoog badan loogu tiraabo in diintu tahay asalka dhaqanka dadka Reer Somaliland. Taasi se waxa ay beenowday markii Wadaadadu la kala safteen siyaasiyiinta, waxa na tusaale fiican inoogu filan murankii Xisbiga KULMIYE ee dhawaanahan socday.
Dhaqan-siyaasaddeedka saddexaad ee Somaliland waa habka dimuqraaddiyadda ee nidaamka axsaabta badan oo ah mid la soo amaaneystey oo aan asal ahaan ummaddu dhaqan u lahayn. Nidaamkan oo ah mid Somaliland door mihiim ah ka cayaara, ayaan haddana ahayn mid sidii la rabay ugu shaqeeyey dawladnimadda curdinka ah ee indhaha caalamku ay muddada badan ka sii jeedeen. Arrinta dawladnimadda casriga ah oo noocan ay Somaliland qaadatey ahi waxa ay si toos ah ula fal-gali kari waydey dhaqannadii rasmiga ahaa ee bulshadu lahayd. Kuwaas oo ay kow iyo laba ka yihiin habka abtirsiinta ee qabiilka oo ah halkii ay adduunyadu ka soo bilaabantay ‘’patrilineal system of identity’, iyo dhaqanka diinta oo aan sidii waayo hore ay ahaan jirtey aan maanta Soomaalida ku dhex ahayn. Dhibtu na waxa ay ka timid dimuqraaddiyadda oo aan dhaqan ummadda u ahayn oo haddana dawladnimaddii isku koobtey, isla markaana dusha kaga dhacdey dhaqannadii aas aaska u ahaa ummadda.
Doorka Axsaabta Qaranka
Haddii uu dhaqan-siyaasaddeedka Somaliland ka kooban yahay saddexdaa qaybood ee aan kor kaga soo sheekeyney. Waxa ay is-weydiintu tahay tubtee iyo wadadee ayey axsaabtii qaranku qaadeen? Dimuqraaddiyadii iyo dhaqan-siyaasiyeedkii qabiliga ahaa halkee ayey isla mareen? Diintu se intee in le’eg bay ka ogoshahay habkan casriga ah ee suuqa xorta ah, xoriyadda ruuxiga ah iyo is-doorashada rukunkeedu ku dhisan yahay is dhaliilista? Jawaabtu waa ay fududahay. Ka hor se inta aynaan u galin hababkan kor ku xusan bal aan eegno nooca ay yihiin ama ay noqdeen axsaabta Somaliland ee dhaqanka qabaa’ilka martida u noqdey:-
Hab-dhaqanka siyaasiga ah ee bulshada ku weyni ama tiirka u ahi waa habka ku dhaqanka qabaa’ilka. Arrintani waxa ay saamaxdey in dadkeenu aaney jirin afkaar iyo hanti si weyn u kala qaybisaa, waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiina ay tahay in ay kala abtirsiin yihiin “patrilineal”. farsamadani waxa ay keentay in dadku ay ku daba faylaan xisbiga ninka reerkooda ahi hogaaminayo oo kaliya, una arkaan in uu tartan ka dhexeeyo cidda aan reerkooda ahayn ee xisbi kale hogaamineysa.
Xisbiyo leh Horjoogayaal, kuwaas oo ah ciddii aas aaska xisbiga lahayd oo nidaam siyaasi ah ama dhaqaale iyo magac raadis u jeclaysatey in ay ku horjoogto xisbiga. Arrintan waxa suurto galisay iyada oo dadka taageeraa aaney tabarucaad dhinaca dhaqaalaha ah oo diiwaan-gashen aaney axsaabta ku lahayn. Taas oo xisbinimadii dhaxalsiisay in hadba ninka dhaqaalaha uu xisbigu ku socdo reerkiisa inta qurbaha joogta ka soo urruriyaa uu ahaado awood aan laga liicin karin oo uu xisbigu u rahman yahay. Halka ay reerkiisuna noqonayaan kuwa kaliya ee uu xisbigu ku abtirsado oo aaney cid kale ka sheegan karin. Waxa tusaale fiican inoogu filan Xisbiga UCID oo dadku ay had iyo goor ku tiraabaan in Jamaal Xisbiga laga kireeyey muddo shan sano ah. Ku darsoo gollaha dhexe ee xisbiyadda Somaliland waxa u badan beesha hadba hogaamiyaha aas aaska xisbiga leh uu ka soo jeedo.
Ummadda oo dhamaan ah ummad Islaam ah iyo habka dimuqraadiga ah noociisa aasaasiga ah qaybo ka mid ah (fundemtal democracy) oo dhaqanka Islaamka si toos ah isaga hor imanayaan, wallow aan dhaqanka Soomaalidu qudhuusu aanu arrintaa aqbali karin. Somaliland qudheeduna ka qaadatey kaliya habka is-doorashada (instrumental democracy). Haddana, waxa jira qayb badan oo bulshada ka mid ah oo cabsi badan ka qaba nidaamka dawladnimadda casriga ah ee ku saleysan Dimuqraadiyadda sooca ah ee aynu la soo degnay. Kuwaas oo inta badan aan iyagu codeyn ama aan ku jirin axsaabta dalka xag taageero iyo xag xubinimo midnaba. Kooxdani waxa ay inta badan ku goodiyaan in loo baahan yahay in Sharciga Islaamka dalka lagu xukumo. Wallow ay jireen kooxo tijaabiyey in ay axsaabta galaan oo ay la wareegaan. Halka ay jirtey in ay ku dhawaaqeen 2012 Xisbi Islaami ah oo siyaasaddeed, markii ugu horeysay.
Waxa kale oo badi ba ay aaminsan yihiin in Soomaalidu hal dawlad yeelato, inkasta oo ay qaarkood ka sii durugsan yihiin oo ay aaminsan yihiin dad aan xad iyo xudduud wadaag ahayni oo magaca Islaam sitaa in ay dawlad sameeyaan la mid ah tii Cismaaniyiinta. Qolooyin kani waa qolooyin huursan oo aan si toos ah u soo wada bixin, haddii uu amaanka dalku liico si toos ah ayey madaxa ula soo bixi doonaan. Laakiin nasiib wanaag waddaaddada fikirkan aaminsani ma aha kuwa badan, xoogga culimadda Somaliland waa kuwa nabdoon oo raba in diinta iyo dawladnimadda si qurux badan la isku waafajiyo oo aan iyagu ahayn kuwa xil doon ah ama awood raadis ah. Tani waxa ay ka dhigan tahay marka ay noqoto qabiilka iyo diinta in dawladnimadda Somaliland uu khatar ku yahay qabiilku. Kaas oo keeni kara musuqmaasuq, eex, caddaalad daro iyo isku dhac siyaasi ah, oo marka dambe na sababi kara in ay ka faa’iideystaan qolooyinkaa huursan sida ka dhacdey dalal badan oo Carbeed iyo waliba Soomaaliyada aynu jaarka nahay.
Arrintani waxa ay keentay in aynu la ildaranahay nidaamkii iyo habkii dimuqraaddiga ee aynu soo amaaneysaney oo aan run ahaantii sinaba u dabbaqeyn dhaqan-siyaasadeedka dhaqan-dhaqaale ee bulshadeena. Dhaqan-siyaasaddeedkan saddexda midab lihi (qabiil, diin iyo dimuqraaddiyad) waxa uu caqabad laf-dhuun-gashey ku noqday nidaamkii dawladnimo ee ay Somaliland dadkeedu filayeen. Iyaga oo moogan sida ay isku qaadan karaan dhaqannadan saddexda ahi oo laba ka mid ah la isku khasbay (diinta iyo qabiilka), halka ay laba ka mid ahina si toos ah isku diidan yihiin (qabiilka iyo dimuqraadiyadda). Waxa aynu ognahay in diinta Islaamka aas aas keedu yahay caddaalad iyo nabad-gelyo ku saleysan Alle ka cabsi iyo cibaado. Waxa se hubaal ah in afcaasha qabiilku uu dhaqan ahaan aad uga soo horjeedo diinteena suuban. Waxa na taa ina faraya dhaqanka qabiilka ee hiilka iyo collaaddu hadheysay oo aynu muddo ku soo dhex jirney.
Faaqidaadda iyo Daraasadeynta Dhaqan-Siyasaasaddeedka
Haddii xaal sidaa yahay, waxa is-weydiin mudan su’aashan in si cilmiyan ah loo wajaho. Isla markaana, jawaab waafi ah oo ku filan kuna saleysan cilmi iyo daraasaad fog loogu helo. Safarkaygii Somaliland ee ee bilihii Julaay, ogoosto iyo Sibteembar waxa aan daraasaad la noolaanshiyo ah (ethnographic research) ku sameeyey saddex ammuurood oo dawladnimadda ku saabsan oo aan tan ugu horeysa idinla wadaagi doono. Cilmi-baadhisahan waxa aan ku qoray Afka Ingiriisiga laakiin waxa mawduuciyan aan idin kula wadaagi doonaa Afkeena hooyo. Su’aasha koowaad ee aan ka jawaabayey waxa ay ahayd:- Sidee ugu haboon ee Somaliland ta dimuqraadiga ahi isku xukumi kartaa? (philosophically, in which way the democratic Somaliland can govern itself?).
Jawaabta su’aashan aniga oo aad u soo koobaya waxa aan ku saleeyey marka hore in aynu fahamno waa maxay dhaqan-siyaasaddeedka Somaliland? Jawaabtu waxa ay tahay in uu yahay ummad qabaa’il ah. Halkaa su’aal kale ayaa ka furmaysa oo odhaneysa hab-qabiil ma la isku xukumi karaa? Jawaabteydu waa haa oo waa la isku xukumi karaa haddii si fiican loo fahmo. Waxaa na taa markhaati u ah in markeedii hore Somaliland lagu sameeyey hab-qabaa’il ah (social contract). Somaliland waxa ay ku sameysantay in ay Beelaha Somaliland wada degaa ay dib u heshiisiin iskugu yimaadeen shirkii Burco ee 1991. Halkaana ay dawladnimo ku saleysan tii 1960 Koonfur wada jirka loo geeyey ay ku soo ceshadeen, iyaga oo isla qaatey magaca Somaliland oo ahaa kii gumaytuhu ka tagey.
Haddii ay sidaa tahay oo ay arrinta qabiilku u shaqeysay ummadda muddo 25 sanno ah, isla markaana lagu xaliyey collaado badan, waxa hubaal ah in qabiilku dawo u noqon karo qayb ka mid ah dawladnimaddeena gaar ahaan nabad-gelyada. Tusaale ahaan dadkeenu waxa ay aaminsan yihiin oo aan si dhib yar looga saari karin habka qabaa’ilka. Haddii ay sidaa tahay waa in aynu aamino oo aynu ogolaano hab-dhaqankeena. Isla markaana, aynu fahamno sida ugu wacan ee ugu faa’idada badan ee aynu ula noolaan karno dhaqan siyaasaddeedkeena ‘’political culture’’. Haddii se la isku dayo in laga takhaluso iyada oo ay jiraan duruufo adag oo aan suurta gal ka dhigayn sida faqri, aqoon daro siyaasaddeed iyo kala shaki bulsho. Waxa ay xaajaddani la mid tahay sidii qof macaan qaba oo bogsiimo raba aan suuro gal ahayn dawo la’aanta cudurka awgeed, isaga oo si fudud ula noolaan karo xanuunka.
Fikir-Siyaasaddeedka ugu Haboon (Applicable Political Ideology)
Haddaba, sidee ayeynu ula noolaan karnaa dhaqan-siyaasaddeedkeenan? Fikir-Siyaasaddeedkaygu waxa uu dhigayaa sida tan:-
Dhaqan-Siyaasaddeedka Qabaa’ilka si fudud ayey Somaliland ula noolaan kartaa oo yaraynaya khasaaraha qabiilku leeyahay (Qabyaaladda). Arrintan waxa suurta-galinaya iyada oo ay inoo sameysan yihiin hay’addii dhaqanka oo ah Gollaha Guurtida ee Somaliland. Halkaa waxa kaliya oo laga toosinayaa waa in odayaasha dhaqanka ee qabaa’iladdu wakiisheen, sida Salaadiinta iyo Cuqaasha lagu soo daro oo loo soo xulo Gollaha Guurtida, marba haddii ay iyagu yihiin kuwa kaliya ee matali kara qabaa’ilka. Qarameyntan kaabo qabiilladu waxa ay fududeyneysaa in dawladnimaddeenu u shaqeyso hab dheeli tiran. Siyaasaddan qarameynta dhaqanku waxa ay ka hor tagi lahayd tiro beelka Sulaadiinta iyo ku dhex-milanka siyaasadda oo wax badan dawladnimaddeenii curdinka ahayd ka xumaysey. Waxaaney ku shaqeyn lahaayeen sharciyad dawli ah oo bulshada inteeda kalena kula xisaabtanto, taas oo ka dhigaysa qolooyinka dhaqanka in si dhib yar loogu diirsado.
Diinta Islaamku waa diinta kaliya ee dalka ka jirta sida runta ah, kuna xusan dastuurka ummaddu u codeysay. Isla markaana, diin aan ahayn diinta Islaamka lagama fidin karo dalka, wax wal oo ka horyimaada diinta waa xaaraam ansax na kama aha siyaasadda ummadda. Su’aashu se waxa weeyi ma qoraal ahaan kaliya ayaa lagu dhaafayaa iyo in dastuurka lagu qorto? Mise si dhab ah ayaa loogu dhaqmayaa? Aniga waxa ay ila tahay in ay ku haboon tahay in si dhab ah loogu dhaqmo si nolosha run sheegeeda iyo dawladnimaddeenu isku waafaqaan. Diintu waxa ay keenaysaa caddaalad oo ay marwalba ina faraysaa, isla markaana waxa ay meesha ka saareysaa dawlad xumadii iyo musuqii hadh beelay.
Si taa loo helo waxa mihiim ah in diinta lafteeda la qarameeyo oo dawladnimadda qayb ka mid ah laga dhigo. Qaybta ugu haboon ee diinta si dhab ah ay isku qaabilayaan waa qaybta caddaaladda oo ah qaybta Maxkamaddaha (Judiciary Organ). Culimada ugu tunka weyn ee dalka oo ay ka hoos shaqeynayaan dad aad u fahamsan siyaasadda diinta Islaamka, isla markaana jaamacaddaheedii ka soo baxay waa in lagu qarameeyaa Gollaha Sharciga ee ummadda. Iyada oo awooddoodii kaamil laga dhigayo kana madaxbanaan qaybta fulinta. Waan ogahay in cabsi badan laga qabo dadka qaarna farta si gaar ah iigu soo fiiqi doonaan. Laakiin waxa aan ogahay in aynu xaq u leenahay in aynu isku xukuno waxa aynu leenahay si miyir qab ah oo aynaan cidna waxba ku yeelayn.
Garsoorku waa laan aan siyaasad ku lug lahay, haddana waa hay’addii sharciga iyo caddaaladda ee dalku lahaa. Waana marjicii ugu sarreeyey ee dawladnimadda. Arrintani waxa hubaal ah in ay u quus-goyn lahayd dad badan oo kitaabka kaliya u sita in ay xukun ku helaan oo iyagu dan ay leeyihiin ku gaadhaan. Kuwaas oo kaalmo iyo taageero ka hela waddamo shisheeye oo ujeedadoodu kaliya tahay ku kali ahaanshiyaha ka faa’iideysiga wabiga Niilka. Carabeynta dadka Diinta Islaamka aaminsan iyo jinsi badalka ama dhalan rogga Afka Soomaaliyeed sidii hore ba Suudaan uga dhacdey. Waana waxa ay Soomaalida Koonfureed eeday 25 kii sanno ee aynu nabadda ahayn, halka inagu si toos ah uga baxney dagaalkii Wabiga Niilka oo siyaasadda Soomaalida ee qasan sababteeda wax badan ku lahaa. Islaamnimaddu ma aha in aad Carab noqoto, Islaamnimaddu waa in aad Illaahay iyo Nabigiisa N.N.K.H.A. rumeyso, ku dhaqanto diinta, isla markaana ku dadaasho nabad-gelyada iyo dhaqanka suuban ee Islaamka hormuudka ka yahay.
Dimuqraadiyaddu waa nidaam dawladnimo oo casri ah, waxa se hubaal ah in aynaan u fahamsaneyn waxa ay u taagan tahay amabase dhaqankeenu kharbudayo. Si aynu isku qaabilsiino dhaqankeena iyo nidaamkan casriga ah waxa haboon in aynu dimuqraadiyadda ka qaadano qaybta doorashooyinka iyo cabirka fikirka siyaasiga ah (instrumental democracy). Nidaamkan oo ah in ay dadku doortaan hogaankooda iyaga oo xor ah, isla markaana ay cabiri karaan fikirkooda marka ay saluugaan (freedom of the press and the public opinion).
Habka qarameynta dimuqraadiyaddu waxa aan soo jeedin lahaa in ay ku eekaato kaliya saddex Golle oo kala ah: Gollaha Wakiillada, Gollayaasha Deegaanka iyo Gollaha Fulinta. Anniga oo ka duulaya arragti falsafadeedkaygan qarameynta dhaqan-siyaasaddeedka ruuxiga, qabiiliga iyo dimuqraaddiga ah waxa lagama maarmaan ah in dawladnimaddeena u sameysano hab isku dhafan “political hybrid system’’ oo waliba is ogol. Siyaasad dhaqameedkani waa ta kaliya ee aan u arko in ay tahay mid Somaliland ay ku badhaadhi karto, xataa haddii ay dhacdo in la qarameeyo midkan ugu daran; waa qabiilka eh. Si la isku ogolaysiiyo hab-dhaqanka-siyaasiga ah iyo dawladnimadda casriga ah oo aynu muddo dheer si ba’an ula kadeedneyn.
Arrinta diinta qudheedu waa xaalad mar walba taagan oo u baahan in dawladnimadda lagu fadwoodo si waafaqsan dhaqanka diinta. Tasaale ahaan adduunyada waxa ka jira 47 waddan oo Muslim ah. Haddii lagu daro Nigeria oo la aaminsan yahay in la qariyo tirada Muslimminta ee dhabta ah iyo Somaliland oo aan wali la aqoonsan waxa ay noqonayaan 49 dawladdood oo Muslim ku abtirsada, nasiib daro se ma jiro waddan kaliya oo isku dabaqay dhankii diinta iyo dawladnimaddii iyaga oo is ogol. Waxa ku magacaaban in ay diin isku xukumaan dalal gaadhaya 6 waddan oo uu Sucuudigu ugu horeeyo oo aynu xaalkiisa ka wada dheregsan nahay. Waxa kale oo jira ilaa ilaa 15 waddan oo ay Somaliland ku jirto oo dastuurka ku qortey in aan wax diinta ka soo horjeeda lagu dhaqmi karin. Halka ay 5 waddan gabi ahaan ba ka aamuseen in ay xusaan nidaamka siyaasiga ah ee ay isku xukumaan iyo doorka diintu ay qaadaneyso.
Waxa kale oo jira ilaa 23 waddan oo ka badheedhay kala saarista diinta iyo dawladnimadda oo uu Turkigu hogaaminayo (secularism). Marka aad si dhab ah u eegto waddamadan intooda nabadda ah, waxa aad arkaysaa in uu jiro guux hoose iyo kacdoono soo ifbaxay oo aan indhaha laga qarsan karin. Sababtuna waxa ay tahay waxa aan is-ogoleyn dhaqan siyaasaddeedkii ummadda iyo hab maamulkii dawladnimadda. Haddii se ay Somaliland arrinkaa tijaabiso waxa hubaal ah in ay ka baxayso dhibta haysata maanta iyo ta mustaqbalka ba. Ma noqon kartid wax aanad ahayn, mana tuuri kartid wax bulshadaadu si mug leh u aaminsan tahay. Diinta, qabiilka iyo dimuqraadiyadda Somaliland waa in dawladnimadda la is- ogoleysiiyaa.
Siyaasadda dalka waa in lagu hagaa nidaam dimuqraaddi ah oo aqoontu kaliya shaqeyneyso, habkaas oo aan marnaba ka hor imaneyn diinteena. Nidaamkan dimuqraaddiga ah waxa nasiib wanaag ah in uu inoo shaqeeyey ee kaliya aynaan ku saleyn dhaqan-siyaasaddeedka ummadda.
Halka nidaamka qabiilka ah na lagu ilaalinayo nabadda iyo wadajirka ummadda oo dawladnimo lagu qurxiyey. Arrintani hawl badan uma baahna, waxa kaliya oo ay ku xidhan tahay Guurtida muddo dhaaftey in loo sameeyo sharciyaddii lagu soo xuli lahaa xubnaha Guurtida oo aan aaminsanahay in laga dhigo odayaasha dhaqanka. Isla markaana, diinta lagu ilaaliyo caddaaladda iyo xaqsoorka ummadda iyada oo loo soo xulayo culimada diinka alle dar illaahay ka yahay ee aan ahayn waddaadada meelaha kale laga hago ee siyaasad iyo xukun doonka ah. Arrintan qudheedu ma aha mid adag, waxa awoodda hirgalinta iska leh hadba Madaxweynaha markaa talada dalka haya oo qaata go’aankaa geesinamada leh.
Haddii diinta maxkamaddaha la keeno oo dawladnimadda gollahaa sharciga ah lagu qarameeyo, waxa loo quus gooyey waddaadkii siyaasiga ahaa ee Kitaabka Alle in uu xukun ku gaadho oo uu salaan u noqdo qorshaynayey. Waxa aynu ka warqabnaa in dalal badan oo Dunidda Muslimka ahi magaca diin cid dan lihi ay ku baabiineyso. In diinta sida ugu haboon loo adeegsado oo dalka iyo caddaaladdiisa lagu dhiso oo wanaaga iyo naxariista Islaamku leeyahay dawladnimo looga faa’iideeyo waa in Maxkamaddaha iyo halka caddaaladda iyo garsoorku yaal kitaabka qur’aanka ah ummadda loo dhigo. Aan ku hadalno waxa aynu ku dhaqano, aan ku dhaqano waxa aynu ku hadalno. Wa Bilaahi Tawfiiq.